Bishnu Sharma: January 2013
Posted by Sharma Bishnu at 1:48 AM 1 comment:
पत्रकार निर्मल थापा र श्रृष्टि श्रेष्ठ सँगै बस्न थालेको दुई वर्ष कट्यो । औपचारकि रूपमा विवाह गरेका छैनन् उनीहरूले । तर, श्रीमान्-श्रीमतीजस्तै सहज र उदार जीवनशैलीमा छन् । भन्छन्, "सँगै बस्न विवाह गर्नैपर्छ भन्ने छैन ।" ज्ञानकुञ्ज श्रेष्ठ र सुशीला तामाङको जोडी पनि निर्मल र श्रृष्टिकै जस्तो हो, जो अध्ययनका लागि नुवाकोटको गाउँले परिवेशबाट काठमाडौँ झरेका थिए । रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसका यी विद्यार्थी अहिले बिनाविवाह दाम्पत्य जीवन बिताइरहेका छन् । मानव अधिकारकर्मी नूतन थपलिया पनि लामो समयदेखि 'लिभिङ् टुगेदर'को अभ्यास गर्नेमध्येका एक हुन् । तर, उनी सम्बन्धको आधार प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
बिनाविवाह वयस्क जोडीहरू एकसाथ बस्न थालेका प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् यी । खासगरी काठमाडौँ उपत्यकामा छ्याप्छ्याप्ती देख्न सकिने यस्ता जोडीहरू सार्वजनिक हुने सवालमा पनि निडर हुन थालेका छन् । नेपाली संस्कृति, परम्परा र कानुनी हिसाबबाट भने यसलाई वैध सम्बन्ध मानिँदैन । पश्चिमी समाजमा विवाह नगरी सँगै बसेर छोराछोरीसमेत हुर्काउने चलन नयाँ होइन । सायद तन्नेरीहरू यसैको सिको गर्न थालेका छन् । यस्तो चलनले पछिल्लो पुस्तालाई आकषिर्त गररिहेको पनि
Posted by Sharma Bishnu at 1:07 AM 1 comment:
चिनियाँ राजदूत याङ होउलान मेरा लागि यसअघिका क्यू गोहाङभन्दा पनि परिचित हुन् । एउटा समारोहको जमघटमा मैले मुस्ताङमा बढ्दो कुट्नीतिक चलखेल र चिनको स्ट्यान्डका बारे उनीसँग हल्का कुरा गरेको छु । अंग्रेजी भाषाका प्रखर वक्ता उनै याङ नेपालप्रति सद्भाव राख्नेमध्येका एक चिनियाँ कुटनीतिज्ञ हुन् । तर, यतिबेला चिनले उनलाई फिर्ता डाकेको छ र अर्को पूर्वी एसियाली मुलुक म्यानमारको राजदुत कार्यभार दिइएको छ । चिनियाँ कम्युष्टि पार्टीको महाधिवेशन लगत्तै याङलाई किन फिर्ता डाकियो भन्ने बारे त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले केही खुलाएको छैन ।
Posted by Sharma Bishnu at 11:29 PM 1 comment:
लोडसेडिङको हैरानी भोगिरहेका नेपाली बिजुली उपभोक्तालाई ध्यानमा राखी ल्याइएको लोडसेडिङ एप्लिकेसनले एन्ड्रोइड फोनमा कीर्तिमान राखेको छ । यो नेपाली एप्लिकेसन निशुल्क डाउनलोड गर्न सकिने टप फ्री एप्स बनेको छ । जसलाई भाइवर, फेसबुक, स्काइप र टेम्पल रन २ ले समेत फलो गरेका छन् । नेपाली तन्नेरीद्धय चन्द्र र एलिजा श्रेष्ठले मिलेर बनाएका हुन् । ‘नेपाल लोडसेडिङ’ नाम राखिएको यो एप्सलाई एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भएका मोबाइलमा मात्र डाउनलोड गरेर चलाउन सकिन्छ ।
Posted by Sharma Bishnu at 11:00 PM 1 comment:
जनवरी ३०, २०१३
नेपाली फिल्म पनि थ्रीडीमा ? कसैले यस्तो भन्छ भने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ कि । प्रिय दाई दीपेन्द्र के. खनालले थ्रीडी प्रविधिमा बनाएको फिल्म मलाई चाहिँ गतिलो लाग्यो । बलिउडको कथित ‘रा.वान’ थ्रीडीभन्दा पनि जाती । नेपालमा पहिलोपटक थ्रीडी फिल्म बन्दैछ भनेर मैले नै पहिलोपटक न्यूज लेखेको थिएँ । एउटा जमघटमा थ्रीडीको दृश्य हेर्ने चान्स पनि पाएँ । ‘भिजिलान्ते थ्रीडी’ दर्शकलाई निराश चाहिँ नपार्ने रहेछ ।
Posted by Sharma Bishnu at 11:12 PM 1 comment:
उनीसँग जिन्दगीमा दुइटा विकल्प थिए – व्यवसाय गर्ने कि बिदेश हानिने । तर, गुनासा होइन विकल्प सुझाउने उनको बानीले बिदेशलाई गौण ठम्यायो । कृषिमा नलागेको भए उनी यतिबेला खाडीमा श्रम बेचिरहेका हुन्थे । बागलुङ–टिपीचौरका तन्नेरी गङ्गा थापा अञ्चलकै अब्बल तरकारी कृषक दरिएका छन् । पैंयुथन्थापको थातथलो छोडेर कुस्मिसेरा हुँदै सदरमुकामको काँठवर्ती गाउँमा आइपुग्दा उनले थुपै्र दुःख पिए, त्यसयता छेवैको काँठेखोलामा धेरै पानी बगिसकेको छ । व्यवसायिक कृषक हुन उनले के मात्र गरेनन्,–विदेश जान घरको बेस्मारी दबाबलाई ललकारे । त्यो पैसालाई कृषिमा लगानी गरे । सुरुताका खेतीमा देखिएको विफलता सहे । द्धन्द्धमा गाउँबाट सदरमुकाम विस्थापित भए र त्यहीं व्यवसायीक कृषिको आन्दोलन थाले । यसबाट उनले सुखजिलो वाहीवाही पाएका छन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 10:40 PM 1 comment:
एकाविहानै साइकिल ब्वाइले फ्याँकेको पत्रिका आँगनमा बीउ छरेजस्तो छरिएका हुन्छन् । टिपेर हेडलाइनमा नजर डुलाउँदा खै के –खै के जस्तै भएको छु म । कभर स्टोरीका उठानले स्वयम अलमल–अलमल परेको छु । के पढ्ने, के नपढ्ने ? निश्पक्ष समाचारका वाहक भनिने ठूला कान्तिपुर र नागरिक–रिपब्लिका र द काठमाण्डू पोस्टमा छापिएका ठूला हेडलाइनले महिनायता दिग्भ्रमित छु । हिजोआज यी ‘ठूला’ अखबार दलका मुखपत्र जस्ता छन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 10:05 PM 1 comment:
जनवरी २८, २०१३
प्रहरी सुरक्षा घेरामा मैले पहिलोपटक सिभिल मलमा ‘चाइना जोडाइक’ हेरेँ । बन्दुकको सुरक्षामा मनोरञ्जन लिनुको दीर्घकलिन प्रयत्न घातक त हुन्छ तर, तत्कालका लागि भने त्यसले मलाई रिफ्रेस तुल्यायो । त्यतिबेला मैले ट्रेलर हेरेको थिएँ –नेपालमाथि बनेको स्पेनी फिल्म ‘काठमाण्डू : मिरर इन द स्काइ’ चाँडै रिलिज हुनेछ । यो फिल्मप्रति मेरो किनपनि यतिको चासो छ भने, फिल्म जसमाथि बनेको हो, उनै महिला पतिद्धारा निर्घात पिटिँदा यो साता साप्ताहिकको रिपोर्टरको रुपमा म उनलाई भेट्न नर्भिक अस्पताल पुगेको थिएँ ।
Posted by Sharma Bishnu at 1:11 AM 1 comment:
कुनै विशेषण र सर्वनामको जरुरी पर्दैन उनलाई चिनिरहन । घरेलु फिल्ममा उनको आफ्नै पहिचान स्थापित छ । मनोज पण्डित अर्थात कन्ट्रोभर्सीका पर्याय । त्यही कन्ट्रोभर्सीले यी मोटो जीउडालका मनुवालाई बेलाबेलामा बहस र विवादको केन्द्रविन्दुमा ल्याइदिन्छ । उनी कन्ट्रोभर्सीका प्रिय यसकारण पनि हुन कि उनी गतिमा विश्वास गर्छन् । नेपाली पर्दामा सबैभन्दा ‘द्वन्द्व’को वकालत गर्नेमा पण्डित अग्रणी छन् । झुस्स दाह्री पाल्ने र कमान्डिङ स्वरको यही व्यक्तिबाट मैले ‘दृश्य भाषा’ र ‘मनोविज्ञान’ सिकेको थिएँ । मलाई दर्शकीय मनोविज्ञानको बोध गराउने व्यक्ति उनै पण्डित थिए जो ‘द्वन्द्व’मा विश्वास गर्छन् । अक्सर हाम्रो चिया गफको मेसो नेपाली समाजको कुनै मुद्दामाथि बहस गर्ने अवसर बन्ने गर्छ ।
Posted by Sharma Bishnu at 12:15 AM3comments:
जनवरी २७, २०१३
मैले नेपालमा कहिल्यै कडा आत्म अनुशासन पालना गरेको थिइँन । जति आइतबार बीबीसी नेपाली सेवाको साझा सवाल कार्यक्रममा गर्नुपर्‍यो । बीबीसीले सहभागिको रुपमा निम्तो त गर्‍यो तर समयाभावले प्रश्न सोध्न पाइँन । सन्दर्भ थियो –ऊर्जा संकट समाधानका लागि नेपाली परिवेशमा वैकल्पिक ऊर्जाको भूमिका कस्तो हुन्छ ?’ डेढ घण्टे कार्यक्रममा मोबाइल निषेध रह्यो । टाउको सीधा अगाडि हेर्नुपर्ने । कार्यक्रम अवधिभर साइड–टक् गर्न, ट्वाइलेट जान, बेन्च सेयर गर्न सबै निषेध । यस्तो लाग्थ्यो –म कुनै अनुशासनको परिक्षा दिइरहेको छु ।
Posted by Sharma Bishnu at 3:07 AM 1 comment:
जनवरी २६, २०१३
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने सरकारी निर्णयले फेरि एकपटक संरक्षण बहस सतहमा ल्याइदिएको छ । विश्वको प्रसिद्ध पदमार्गलाई फेरि उहि पुरानै व्यवस्था र भड्खालोमा हाल्ने यो प्रयासले हित गर्दै गर्दैन । जबसम्म स्थानीय बासिन्दा र समुदाय संरक्षणका लागि आफै लागि पर्दैनन् तबसम्म यसले उपलब्धी दिँदैन । ४ वर्षका लागि पुनः कोषलाई दिने निर्णय गर्नुअघि कोषको प्रतिबद्धता र कामको भावी योजना खोजिनुपथ्र्यो । मेरो व्यक्तिगत भनाईमा कोषलाई नै एक्याप सुम्पिनु भ्रष्टाचार र मनपरीकै निरन्तरता हो ।
Posted by Sharma Bishnu at 3:54 AM 1 comment:
मलाई समाजसँग गाँसिएका सेलिव्रेटी आदर्श लाग्छन् । तर, समाजमा ती सेलिव्रेटीको बहुमत छैन । हाम्रै नेपालमा पनि एकाध त्यस्ता सेलिव्रेटी त छन् जो परिक्षामा अझै पास भैसकेका छैनन् । ती सेलेब्सको फिल्म रिलिज मिति थाहा पाउने वित्तिकै म अक्सर फस्ट डे –फस्ट सोको टिकट बुकिङ गरिहाल्छु । अहिले मेरो मनमा डेनियल डे लेविस, आमिर खान र क्याथरिन बिगेलोप्रति श्रद्धाभाव छ । टाइम म्यागजिनका व्यक्ति मात्र नभएर यी तीनले समाजलाई फिल्मसँग जोड्ने उदाहरणीय मानक खडा गरेका छन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 2:41 AM 1 comment:
यति ‘बोल्ड’ उपन्यास नेपाली साहित्यमा मैले कहिल्यै पढेको थिइँन । मोडल स्मिता थापामाथि राजेन्द्र थापाले लेखेको ‘खेलौना’लाई दुई जना सामु बसेर पढ्न हिम्मत बटुल्नुपर्छ । एकै सिटिङमा मैले उपन्यास सकेँ । एकातिर अकुपाई बालुवाटार र लगातार महिला हिंसाका घटना भैरहँदा एक युवतीको खुल्ला स्वीकारोक्तीले नेपाली समाजको एउटा गतिलाई चित्रण गरेको छ । फिल्मका पर्दामा जस्तै पुस्तकमा पनि ‘एटीएम’ र ‘चपली हाइट’ पसेको छ भनेर पनि भन्न सकिएला । कतिपयले छाडा पनि भन्लान् तर म भन्छ –यो श्लिलता र अश्लिलताको सन्तुलन हो ।
Posted by Sharma Bishnu at 1:40 AM 1 comment:
आजभोली अमेरिका आउने नेपालीहरुको संख्या दिन-दिनै बढ्दैछ । अमेरिका आएर केही वर्ष बसेर नेपाल पुगेपछि ती नेपालीहरुको गफ सुन्दा अमेरिकामा तिनलाई चिन्ने जान्नेहरु ए फलानोको हैसियत यो पो रहेछ भनेर उल्टो छक्क पर्दछन् । धेरै वर्षअघि अमेरिकाबाट नेपाल पुगेर रसेन्द्र भट्टर्राई नामक एक व्यक्तिले नेपालको एक दैनिक मारफ्त दिएका गफ सायद धेरै नेपाली पत्रकारहरुले बिरि्ससकेका होलान् । त्यसो त ती भट्टर्राईको निधन भएकै निक्कै वर्ष बितिसकेको छ ।
त्यही भएर होला आजभोली फेरी त्यही प्रवृत्तिका मानिसहरुको गफले नेपालका पत्रपत्रिका तथा नेपाली अनलाइन, टेलिभिजनहरु भरिन थालेका देखिन्छन् । जो अमेरिकामा सामान्य मजदुरी गरेर जीवनयापन गरिरहेको हुन्छ तर उसलाई नेपाल पुगेर आफू अमेरिकामा रहेको नेपालीमध्येकै उत्कृष्ट हुँ भन्ने देखाउन रहर चल्छ र उसले नेपालका संचारमाध्यमहरुलाई प्रयोग गरिरहेको देखिन्छन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 2:38 AM 1 comment:
संसारकै सर्वोत्कष्ट फिल्म अवार्ड ओस्कर (एकेडेमी अवार्ड) घोषणा हुन एक महिना जति बाँकी छ । यो बीचमा सानातिना सबै फिल्मका पण्डितले विजेताको अड्कलबाजी थालेका छन् । म पनि तिनै हजारौं मध्येको एक हुँ । नेपालमा फिल्म रिलिज नभएपनि तिनका समिक्षा, फुटेज, महत्ता, समाचार र प्रभावको विश्लेषण गरेर ओस्कर प्रेडिक्सन गरेको छु । यो सन्दर्भमा मैले ओस्कर अवार्डलाई विशुद्ध फिल्म निर्माणसँग मात्र लिएको छैन, अमेरिकी परराष्ट्र नीतिसँग पनि जोडेको छु । फिल्म चलचित्र मात्र होइन, संस्कृति थोपर्ने माध्यम पनि हो ।
Posted by Sharma Bishnu at 2:02 AM 1 comment:
जनवरी २४, २०१३
यतिबेला सिंगो मुलुक आन्दोलनमा छ । पत्रकार सडकमा । विपक्षी सडकमा । कलाकार सडकमा । स्वयम सत्तापक्ष सडकमा । लोकतन्त्रलाई गति दिन भए सहमति, नभए आन्दोलनको उपाय हुँदैन । विना मुद्दा आन्दोलन चल्दैन । एउटा चिनियाँ उखान छ –‘मेरो अगाडिको यात्रा त्यो पहाडले रोकेको होइन, मेरै जुत्ताभित्रको ढुङ्गाले रोकेको हो ।’ अहिले यस्तै भएको छ, फिल्मकर्मीको आन्दोलन पनि । फिल्मलाई उद्योगको मान्यता दिलाउन आन्दोलन गर्नुपर्नेमा, अनुहार फेरेर अध्यक्ष बनाउने कसरत भैरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगै बसेर तीनवटा फिल्म हेर्ने अवसर पाएको छु मैले । ‘दासढुंगा’, ‘मसान’ र ‘जलजला’ हेरेपछि उनलाई प्रतिक्रिया पनि सोधेको थिएँ । उनले डाकेको चियापानमा संस्कृतिकर्मीको रुपमा सहभागि पनि रहँ । हाम्रा फिल्मप्रेमी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई जति फिल्म हेर्ने नेता अहिलेसम्म यहाँ सायदै छन् होला । उनै प्रधानमन्त्री भएको बेला फिल्मकर्मी आन्दोलनमा उत्रनु दुःखद संयोग चाहिँ अवश्य नै हो । कस्मेटिक लोकप्रियता खोज्ने भट्टराईको प्रवृत्तिबारे मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन ।
Posted by Sharma Bishnu at 12:54 AM 1 comment:
जनवरी २३, २०१३
अक्सर मिहेनतपूर्वक खिचिएका दृश्यभाषाले मलाई भावुक तुल्याउने गर्छन् । ती सिनेम्याट्रिक ल्यांग्वेजमा शक्तिशाली विम्व, रुपक र भाषा हुन्छन् । यस्ता कैंयन फिल्म हेर्दा टिस्यु पेपर पनि सकेको छु मैले । एकवर्ष अघि नेपालमाथिको स्पेनी फिल्म हेरेर आसु बगाएको थिए । फेरि, यस्तो एउटा फिचर फिल्मले मलाई आज चिमोट्यो र ब्लगमा लेख्न बाध्य भए । धन्यवाद छ, एकेडेमी अवार्ड नोमिनेटेड निर्देशक रिचर्ड इ रोविन्स, जसले विश्वभरका प्रतिनिधि किशोरीमाथि आधारित रहेर फिचर फिल्म बनाएका छन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 1:34 AM 1 comment:
(बागलुङ) जनवरी २३, २०१३
पानीमा विकास देख्ने गाम्लेको मिहेनत स्पर्श गरेपछि उनी पुलकित बनिन् । गाउकी बुढीआमैलाई गम्लङ्ग अगालिन । खुशी र संस्कृति साटिन् अनि अग्रेजी लवजमा चिच्याइन् –‘वाऽऽ हाउ ! इन्ट्रेस्टिङ’ लन्डनबाट नेपाल हानिदा उनले सायदै सोचेकी थिइन् –दूरदराजका गाउमा पसेको पानी विकास ।’ जसै उनले यहाको दगातुन्डाडाका उकाली ओराली नापिन सोचाइ बिल्कुलै अस्वभाविक अनुभूती भयो । लघुजलविद्युत विकास गाउमा पुगेपछि विश्व बैंककी प्रवन्ध निर्देशक नगोज अकोन्जो इवेलाको हृदयमा खुशीले पालुवा हाल्यो । ऊर्जाको बैकल्पिक माध्यम लघुजलविद्युतले यो दूरदराजको गाउ“मा ल्याएको उत्ताल सुविधा देखेपछि दातृ संस्थाकी यी अधबैंशेले मन थाम्न सकिनन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 12:33 AM 1 comment:
जनवरी २३, काठमाडौं
बलिउडले आगामी मे ३ तारिखमा एकसय वर्ष मनाउँदैछ । ‘सत्य हरिश्चन्द्र’ रिलिज भएको शताब्दी अवसरमा मैले बलिउडको सयवर्षे ट्रेन्डलाई केलाएको छु । आफ्नो पहिचान नबनाएको र लामो इतिहास पनि नबोकेको नेपाली फिल्मले बलिउडको यो विकासक्रमलाई गम्भिर रुपमा लिनु जरुरी छ । अर्को हप्ता हलिउडको ट्रेन्ड विश्लेषण गर्नेछु ।
समिक्षक कोमल नाहटा भन्छन् –‘बलिउड हलिउडको बाटोमै यात्रा गर्दैछ, अति कर्पोरेटकरण र ब्यापारीकरणको उक्त दिशालाई सच्याइएन भने निश्चित छ, बलिउड ब्यापार र संस्कृतिको द्वन्द्वात्मक चपेटामा फस्नेछ ।’ सिनेमा पण्डितहरूका लागि यो आम चासोले कम्पास हराएको जहाजजस्तै बलिउडको वर्तमान दिशाहिन ट्रेन्डलाई अथ्र्याउँछ । आर्थिक उदारीकरणपछि ह्वात्तै बढेको मध्यमवर्गले बलिउड बजार आयतनलाई मात्र विस्तार गरेन, वर्ष २०११ देखि वर्षेनी एक हजार सिनेमा उत्पादन गरेर मुम्वैया सिनेमाले हलिउडलाई पनि उछिन्यो । यो वर्ष बलिउडले एकसय वर्ष पुरा गर्दैछ र यो छेकोमा बलिउड समिक्षकहरू आफ्नो सिनेमाको ट्रेन्ड, चुनौति र भविष्यबारे बुद्धिविलास गरिरहेका छन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 12:02 AM 1 comment:
जनवरी २२, २०१३
अभिनेत्री मनिषा कोइराला निर्देशित फिल्म ‘सिद्धार्थ द बुद्ध’ कोलम्बोमा रिलिज भएको छ । उनीसहायक निर्देशक हुन् । चन्द्रम रुत्नाम निर्देशित फिल्मलाई श्रीलंकाली सरकारले बनाएको हो । न्यूयोर्कमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकी बलिउड हिरोइन कोलम्बोमा आयोजित बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिभलमा गतवर्ष भाग लिन जाँदा सुटिङमा थिइन् । पछिल्लो साता गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबारे भारतले अनावश्यक दावी गरिरहँदा छिमेकी श्रीलंकाले रिलिज गरेको यो फिल्मलाई कुटनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
Posted by Sharma Bishnu at 1:59 AM 1 comment:
छोसेरका आङफुट्टी गुरुङ अब कैंयन वर्षसम्म थातथलो फर्कने छैनन । भोटेताल्चा झुण्डिएको छ दैलोमा । पढाइ पनि बीचैमा टुंगियो । तबेलाका घोडा, खच्चर पनि जोमसोम झरे । त्यो भन्दा पनि जन्मथलो छाड्नुपर्दाको अवसाद आङफुट्टीको अनुहारमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । हालै बेसीको पोखरामा रोजगारका लागि भौंतारि“दै गरेको बेला भेटिए आङफुट्टी । कारण –बेमौसममै परिवारसहित हिमालवारि झरेका हुन् उनी । अब घुमन्ते व्यापारको सिलसिला सुरु हुनेछ यो हिमाली परिवारको । बेसीको महंगीमा टिक्न र थलिएकी आमाको उपचारका लागि पैसा कमाउनु आवश्यक छ आङफुट्टीलाई ।
Posted by Sharma Bishnu at 12:58 AM 1 comment:
विश्वविख्यात रंगकर्मी बर्तोल्त ब्रेख्तको एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘सिनेमा बदलिदैमा मान्छे बदलिने होइन । बरु, मान्छेको जीवनशैली बदलिएमा सिनेमा बदलिने हो । यसैले आजको अर्थव्यवस्थामा मनोरन्जनपूर्ण फिल्महरू बनाउनुको सट्टा कला फिल्म बनाउनुको परिणाम निस्किएला, रद्धि कला अनि खराब व्यवसाय ।’ उनले फिल्मलाई ‘रद्धि कला अनि खराब व्यवसाय’ भनेपनि नेपाली मायानगरीमा पस्ने हिरोइन भने दिन दुईगुणा, रात चौगुणाको दरले बढीरहेका छन् । यहा ‘रातारात’ नया हिरोइन् ‘एक्सन’ र ‘कट’मा जीउ मकाईरहेकी हुन्छिन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 11:51 PM 1 comment:
आज (जनवरी २२), बेतारे हिरो महावीर पुन जन्मिएको दिन । सफलताको शुभकामना यी कर्मवीरलाई । जन्मदिनको छेकोमा मैले महावीरका एकाध किस्सा सम्झिएको छ । मेरै गृहजिल्लाका यी कर्मवीर वास्तवमै प्रेरणाका स्रोत हुन् । उनले हिमाली गाउँहरूमा ल्याएको इन्टरनेट क्रान्तिले मेरो जीवनमा ठूला प्रभाव पारेका छन् । अमेरिकी भौतिक सम्पन्नतालाई चटक्क छाडेको घटना अस्वभाविक लाग्छ । उत्तरी म्याग्दीलाई नेपालको ‘सिलिकन भ्याली’ भन्दा फरक नपर्ला कि ? तर, ती महावीरले कसरी र कसको प्रेरणामा समाजसेवा थाले ?
Posted by Sharma Bishnu at 10:55 PM 1 comment:
Posted by Sharma Bishnu at 1:26 AM 1 comment:
Posted by Sharma Bishnu at 3:02 AM 1 comment:
Posted by Sharma Bishnu at 1:28 AM 1 comment:
अभिनेता तथा अभिनेत्रीहरू निर्देशक बन्ने ट्रेन्ड वर्ष २०१३ मा निकै बढ्नेछ । केहीवर्षयता अपेक्षा गरिएका कलाकारले निर्देशनमा जागरुकता देखाएका छन् । निर्माणमा लगानी गर्ने क्रम त पुरानै हो यद्यपी २०१३ भित्र निर्देशक बन्ने लगभग पक्कापक्की भएका केही अभिनेता र अभिनेत्री छन् जो यतिबेला निर्देशनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । प्राप्त विवरणअनुसार एक्सन कट्को सूचिमा थपिने निर्देशकहरू यसप्रकार छन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 9:01 PM 1 comment:
Posted by Sharma Bishnu at 8:39 PM 1 comment:
फिल्म राम्रो बन्नु र चल्नु अलग कुरा हुन् । राम्रो बनेपनि, चलिदिएन भने हितकर हुँदैन । फिल्म गतिलो नभैदिए, लगानीकर्ताको रुचि घट्छ र कमब्याक सहज हुँदैन । अझ, कलाकारको फेसभ्यालु र करियर यसैमा टिकेको हुन्छ । एक करोड पनि आम्दानी नगर्ने फिल्मका कलाकारको भ्यालुमा यति चाँडो पहिरो जान्छ कि, हत्तपत्त उनीहरु निर्माताको रोजाइमा पर्दैनन् । तर, यतिबेला नेपाली फिल्म केही यस्ता कलाकारको कक्षमा फन्को मारिरहेको छ, जो करोड क्लवका सदस्य छन् र एकसाथ पैसा छाप्ने मेसिन पनि ।
Posted by Sharma Bishnu at 3:05 AM 1 comment:
Posted by Sharma Bishnu at 2:25 AM 1 comment:
२५ वर्ष लामो दौडको एक्लो घोडा हुन् राजेश हमाल । फिल्मको ट्रयाकमा उनी आजपर्यन्त बुर्कुसी मार्दै छन् । अढाइ दशक लामो अभिनय करियरमा उनले २ सय ९० फिल्म खेले । त्यति नै शक्तिशाली पात्रहरूको चरित्रचित्रण गरे अनि आलोचकको मुख थुने । अक्टोवरदेखि हमाल निर्देशक बन्नेछन् । स्वर्गीय मामा दीपक रायमाझीको अधुरो फिल्म ‘डेस्टिनेसन काठमाण्डू’लाई प्याकअप गर्दैछन् उनी । तिनै रायमाझी हुन् जसले भाञ्जा नाता पर्ने हमाललाई ‘युगदेखि युगसम्म’बाट व्रेक दिए ।
Posted by Sharma Bishnu at 12:17 AM 1 comment:
Posted by Sharma Bishnu at 12:06 AM 1 comment:
Posted by Sharma Bishnu at 11:32 PM 1 comment: